Il Vaticano pubblica il libro delle omelie sulla pandemia di papa Francesco | Io amo Gesù
Vatican na-ebipụta akwụkwọ nke ụlọ nkpokọ na oria ojoo nke Pope Francis
di Paolo Tescione - Julaị 25, 2020
Akwụkwọ ebipụta nke gụnyere ndo nke Pope Francis n'oge mgbochi coronavirus na hastali ebipụtala site na Vatican.
"Onye siri ike na ihu mkpagbu: Churchka na udo - Nkwado doro anya na oge ọnwụnwa", na-anakọta ezinaụlọ, ekpere na ozi ndị ọzọ nke Pope Francis nyefere site na Machị 9 rue Mee 18, 2020.
Akwụkwọ mpempe akwụkwọ ahụ dị maka ịzụta na Amazon.com maka $ 22,90.
Ọ gụnyekwara ihe onwunwe maka oge mgbe ịnweta sacrament ahụ agaghị ekwe omume na ngọzi na ekpere ndị ọzọ nke Chọọchị.
Akwụkwọ PDF n'efu bụ nke dị na weebụsaịtị Vatican Publishing House n'asụsụ dị iche iche, mana dịka Vatican News si kwuo, e nwere arịrịọ maka mbipụta.
Br. Giulio Cesareo, onye isi nchịkọta akụkọ nke ụlọ obibi akwụkwọ Vatican, gwara Vatican News na Pope Francis "bụ nna, onye ndu mmụọ nke so anyị ka anyị bi n'oge ahụ [nke mgbochi]".
“Ulo-obibi-ya nile di oke ọnụ ahịa n'ihi na ha abaghị uru ma mgbe ahụ. Anyị ka na-enwe esemokwu, ihere, ihe isi ike n’ekpere. O nwere ike ịbụ na anyị na-anabatakwu ma na-a atta ntị na ihe ọ gwara anyị mgbe ahụ, “ka o kwuru. "Mana ọ dị mkpa idobe okwu ya ka anyị wee nwee ike na-eriju afọ site na okwu ọma ndị o kwuru banyere ndụ."
N'ime ngwụcha izu iri nke intali, ihe e mere iji belata ọrịa COVID-10, Pope Francis na-agbasa ụtụtụ ụtụtụ kwa ụbọchị na ezumike nka nke Vatican ebe o bi, Casa Santa Marta.
Popu ga-emeghe uka nke obula site n’itinye ebumnuche ekpere jikọrọ ya na nsogbu ahu ike.
Mgbe e mesịrị, ọ ga-eduzi ndị soro Mass n'ụlọ site na omume ime udo, ọ ga-ejide 10 Oriri Nsọ nke Oriri Nsọ.
Ọtụtụ nde mmadụ gburugburu ụwa na-ekiri na Machị 27 maka ndụ ozi telivishọn na-ebi ndụ nke Pope Francis mere n'ụlọ ebe tọgbọ chakoo na St. Peter ikpe ekpere maka ụwa n'oge oria ojoo nke coronavirus.
Oge nsọ ahụ nke were ngọzi dị egwu sitere na Urbi et Orbi nwere ngụgụ na ntụgharị uche nke Francis, onye kwuru maka okwukwe na ntụkwasị obi na Chineke n'oge ndị mmadụ na-atụ egwu ndụ ha. , nakwa ndị na-eso ụzọ ya mgbe oké ifufe kpara ụgbọ ha.
“Anyị nwere arịlịka: a zọpụtawo anyị n’obe ya. Anyi nwere okpu agha: n’elu obe ya ka a gbaputara anyi. Anyị nwere olile anya: n'obe ya a gwọọ anyị ma makụọ anyị nke mere na ihe ọbụla ma onweghị onye nwere ike ikewapụ anyị n'ịhụnanya mgbapụta ya, "ka popu kwuru.
Ntughari uche nke Pope na ekpere ya site na oge awa di nso na ngozi so na ndi a gbakwunyere "Onye siri ike na nkpagbu"
Ọrịa coronavirus zuru ụwa ọnụ agbasaala ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ mba ọ bụla n'ụwa, ihe karịrị nde mmadụ 15 ederede ederede na ihe karịrị ọnwụ 624.000, dị ka Mahadum John Hopkins University COVID-19 Resource Center si kwuo.